Ajụjụ - Civen Metal Material (Shanghai) Co., Ltd.
Gịnị bụ foil ọla kọpa?
Ihe nchara ọla kọpa bụ ihe ọla kọpa dị ezigbo mkpa. Enwere ike kewaa ya na usoro ụzọ abụọ: akpọrepu (RA) foil ọla kọpa na foil ọla kọpa (electrolytic (ED). Ihe mkpuchi ọla kọpa nwere ezigbo ọkụ eletrik na ọkụ na -ekpo ọkụ, ma nwee ikike nke ịchekwa akara eletriki na ndọta. A na -eji foil ọla kọpa n'ọtụtụ buru ibu n'ịrụpụta ngwa elektrọniks. Site na mmepe nke nrụpụta ọgbara ọhụrụ, ọchịchọ maka ngwa elektrọnịkị dị gịrịgịrị, dị larịị, nke pere mpe na nke na -ebugharị ebugala ọtụtụ ngwa maka foil ọla.
Kedu ihe a na -akpọ foil ọla kọpa?
A na -akpọ foil ọla kọpa akpọrọ dị ka foil ọla kọpa. Ọ bụ ihe ọla kọpa nke nrụgharị anụ ahụ na -emepụta. N'ihi usoro nrụpụta ya, foil ọla kọpa RA nwere akụkụ okirikiri n'ime. Enwere ike ịhazigharị ya ka ọ dị nro ma sie ike site na iji usoro mgbapụta. A na-eji foil ọla kọpa RA rụpụta ngwa elektrọniks dị elu, ọkachasị ndị chọrọ ụfọdụ mgbanwe na ihe ahụ.
Kedu ihe bụ foil electrolytic/electrodeposited copper foil?
A na -akpọ foil ọla kọpa elektrik dị ka foil ED. Ọ bụ ihe eji emepụta ọla kọpa nke usoro ntinye kemịkal mepụtara. N'ihi ọdịdị nke usoro mmepụta, foil ọla kọpa electrolytic nwere usoro ogidi n'ime. Usoro mmepụta nke foil ọla kọpa electrolytic dịtụ mfe ma ejiri ya na ngwaahịa chọrọ ọtụtụ usoro dị mfe, dị ka bọọdụ sekit na batrị lithium na -adịghị mma.
Kedu ihe dị iche n'etiti RA na ED foils ọla kọpa?
Foil ọla kọpa RA na foil ọla kọpa nwere uru na ọghọm dị na usoro ndị a:
RA foil foil dị ọcha karịa ọdịnaya ọla kọpa;
Foil ọla kọpa RA nwere arụmọrụ ka mma karịa foil ọla kọpa electrolytic n'ihe metụtara anụ ahụ;
Enwere obere ọdịiche dị n'etiti ụdị foil ọla kọpa n'ihe metụtara kemịkal;
N'ihe gbasara ọnụ ahịa, ED foil ọla kọpa dị mfe imepụta oke n'ihi usoro nrụpụta ya dị mfe ma dịkwa ọnụ ala karịa foil ọla kọpa.
Na mkpokọta, a na -eji foil ọla kọpa RA na mmalite nke imepụta ngwaahịa, mana ka usoro nrụpụta na -akawanye njọ, ED foil foil ga -eweghara iji belata ọnụ ahịa.
Kedu ihe ejiri foils ọla mee?
Ọkpụkpụ ọla kọpa nwere ezigbo ọkụ eletrik na ọkụ ọkụ, yana ọ nwekwara ezigbo ihe mkpuchi maka akara eletriki na ndọta. Ya mere, a na -ejikarị ya eme ihe maka ịgbanye ọkụ eletrik ma ọ bụ ikpo ọkụ na ngwaahịa eletriki na eletriki, ma ọ bụ dị ka ihe mkpuchi maka ụfọdụ ngwa elektrọnik. N'ihi ihe pụtara ìhè na nke anụ ahụ nke ọla kọpa na ọla kọpa, a na -ejikwa ha na mma ụlọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Kedu ihe ejiri foil ọla mee?
Akụrụngwa maka foil ọla bụ ọla kọpa dị ọcha, mana akụrụngwa dị na steeti dị iche iche n'ihi usoro mmepụta dị iche iche. A na -eji foil ọla kọpa akpọrọ akpọrọ site na mpempe akwụkwọ ọla kọpa electrolytic ka agbaze wee tụgharịa; Ihe mkpuchi ọla kọpa eletrọnịkị kwesịrị itinye ihe ọkụkụ n'ime ihe ngwọta sọlfọ acid maka ịgbasa dị ka ịsa ahụ ọla, mgbe ahụ ọ na-enwe mmasị karịa iji akụrụngwa dị ka ogbugba ọla kọpa ma ọ bụ waya ọla kọpa maka mgbaze ka mma na sọlfọ acid.
Ihe mkpuchi ọla kọpa ọ na -aga nke ọma?
Ions ọla kọpa na -arụsi ọrụ ike na ikuku ma nwee ike meghachi omume n'ụzọ dị mfe na ion oxygen dị na ikuku iji mepụta ọla kọpa. Anyị na-ejikwa foil ọla kọpa kpuchie elu ụlọ n'oge usoro mmepụta, mana nke a na-egbu oge naanị mgbe foil ọla na-egbu egbu. Ya mere, a na -atụ aro ka ị jiri foil ọla kọpa ozugbo enwere ike. Chekwaa foil ọla kọpa a na-ejighị ya mee na ebe kpọrọ nkụ, nke na-anaghị enwu ọkụ n'ebe ikuku na-adịghị agbanwe agbanwe dị. Ọnọdụ nchekwa akwadoro maka foil ọla bụ ihe dịka ogo 25 Celsius na iru mmiri ekwesịghị ịfe 70%.
Ihe mkpuchi ọla kọpa ọ bụ onye nduzi?
Ọla kọpa abụghị naanị ihe na-eduzi ihe, kamakwa ọ bụ ihe nrụpụta ụlọ ọrụ kacha dị ọnụ ahịa. Ihe nchara ọla kọpa nwere eletriki na conductivity thermal ka mma karịa ihe ọla nkịtị.
Igwe teepu foil ọ na -eduzi n'akụkụ abụọ?
Teepu foil teepu na -abụkarị ihe na -eduzi n'akụkụ ọla kọpa, a pụkwara ịme akụkụ nrapado site n'itinye ntụ ntụ n'ime nrapado. Yabụ, ịkwesịrị ikwenye ma ịchọrọ teepu foil ọla kọpa nwere otu akụkụ ma ọ bụ teepu foil ọla kọpa nwere ihu abụọ n'oge ịzụrụ ihe.
Kedu ka ị ga -esi wepu ọxịdashọn na foil ọla kọpa?
Enwere ike wepu foil ọla kọpa nwere obere ọxịdashọn na sponge mmanya. Ọ bụrụ na ọ bụ ọxịdashọn ogologo oge ma ọ bụ ọxịdashọn nke dị ogologo, ọ dị mkpa ka ewepụ ya site nhicha ya na sọlfọ acid.
Kedu ihe bụ foil ọla kọpa kacha mma maka iko nwere ntụpọ?
CIVEN Metal nwere teepu foil ọla kọpa maka iko nwere ntụpọ nke dị mfe iji.